Okuvela ubuhlungu enhliziyweni kungase kubonise khona izifo yomthambo i-aorta, esifubeni udonga kanye nezinye izinkinga zempilo. Ngokuvamile kuba ischemic isifo senhliziyo, dyshormonal zenhliziyo, yesosha inhliziyo noma osteochondrosis wesibeletho.
Okuvamise waphawula isimo lapho e inhliziyo ubuhlungu kukhona eside futhi iphindzaphindvwa njalo. Futhi laba bantu bayahlupheka, ejwayele lokujabulela ubuhlungu, funa usizo lwezempilo lapho ubuhlungu unamandla kakhulu. Phakathi naleso sikhathi, nobuhlungu besikhashana kuyinto uphawu esivimba amanzi infarction noma angina. Ngaphezu kwalokho, ubuhlungu ezingavela ngenxa izimbangela ezimbili noma ngaphezulu. Ezimweni ezinjalo kuba nzima kakhulu ukuqonda ubuhlungu.
Uma enhliziyweni izinhlungu ezihambisana isilethikusebenza noma angina, leso senzo esiphuthumayo kumele kuthathwe ngokushesha. Kodwa uma ubuhlungu libhekisela extracardiac imvelaphi ke ugijimele bathathe isinyathelo akudingekile. Yingakho, uma kukhona ubuhlungu buthuntu inhliziyo, noma ubuhlungu yinto ehlukile, kubalulekile ukufunda izici ezilandelayo: indawo, isiqondiso, ubude, kanye nohlobo izici. Ngaphezu kwalokho, kudingeka sikhumbule uma lolu hlobo ubuhlungu kanye phambi livelile, futhi ukucacisa izimo eyaqala ukuvelela emva ubuhlungu.
Manje mayelana nezimpawu isifo ukuthi ahambisana labo noma ezinye nobuhlungu bomzimba. Ubuhlungu besifuba kubonisa esivimba amanzi infarction noma angina pectoris. Okungukuthi, nangaphansi kwezimo ezinjalo, ubuhlungu is constricting, ngokucindezela, asinikeze ehlombe langakwesokunxele, ezandleni (elilodwa noma amabili) ku emhlathini, kanye hhayi ukuba kuthiye ukuphefumula.
Uma ubuhlungu esiyitholayo endaweni phezulu inhliziyo, khona-ke kungenzeka akusuki inhliziyo. Ikakhulukazi uma inhliziyo ubuhlungu emfushane, bamgwaza, zivela esifundeni ingono kwesokunxele noma kwezinye izindawo uhhafu kwesokunxele esifubeni. Uma ubuhlungu isakazekela underarm, kungenzeka kuwuphawu esiwohlozayo disc isifo noma uphawu okusondelayo ukuqubuka kwesikhumba ezimise okwama-tile. Ngokuvamile, lezi izinhlungu kungukuthi ezihlobene ischemia, infarction futhi ayinawo umsuka yenhliziyo.
Esikhathini ukuhlaziya ubuhlungu enhliziyweni okudingekayo ukuze ikhumbule ubude bayo. Nobuhlungu besikhashana nemvelo, kuze kube nini nanini imizuzwana embalwa, hhayi ejwayelekile angina. Ngenxa yalesi sifo ngokuhlaselwa imizuzu 3-5 ka, ngezinye izikhathi 10. Ukuphatheka kabi omude ubuhlungu uhlamvu retrosternal kuwumphumela a isilethikusebenza.
Ubuhlungu ehlala ezingaphezu kwesisodwa ngosuku uye neanginoznoe imvelaphi. Lolu hlobo ubuhlungu njalo elihlobene ne umthwalo indiza ngokomzimba, ukucindezeleka ngokomzwelo, kubanda, noma nge ukudla obukhulu. Uma ubuhlungu enhliziyweni ivela endaweni lisalele nasesikhathini awulutho zinyamalale, khona-ke kungenzeka ngenxa esiwohlozayo disc isifo, Reflux ezofagiata noma pericarditis. Uma kubonakala buthakathaka ubuhlungu landa ngesikhathi udonsa umoya - lokhu kuwubufakazi pleural noma pericardial.
Ekuhlaziyeni yobuhlungu kubalulekile acabangele izici ezifana ukuhlanza, isicanucanu, ubuthakathaka, ukwesaba ukufa, futhi ukujuluka, okungase kwenzeke ngokuhlanganyela ubuhlungu.
Lapho isifo senhliziyo leli sosha sika waphawula ezidabukile noma ukugwaza ubuhlungu enhliziyweni. ubuhlungu okunjalo kungenakususwa nitroglycerin ngeke kuphela valokordin, validol noma sine.
Mayelana nesifo ngamunye singakwazi ukubona eziningi izici okubi kakhulu yayo, kodwa kungcono uthintane ochwepheshe ngubani ayichaze imbangela ivela khona futhi ahlele impatho. Ngisho kahle ngokuhlola ubuhlungu zabo, singaphetha ahlulele izizathu nesenzakalo yayo. Phendula lo mbuzo ungabuzwa kuphela ekwelapheni udokotela professional. Nguye kuphela ongabhubhisa kahle nika izincomo ukunamathela (uma kunesidingo), ukwelashwa noma ezinye izindlela.
Sore ephansi emuva aphansi esiswini: izimbangela, izindlela emzabalazweni
Uvendle - kuyini futhi ludluliselwa kanjani? ekuvimbeleni izifo
Myopia Maphakathi - okusho lokhu yini umphumela?
Indlala yegilo ukhamisile: imbangela kanye nobungako
Ngokucophelela, ukutheleleka! Sazi kanjani ukusiza umgomo ngokumelene imikhaza
Camp "Shahtinskii yendwangu isisebenzi." ikamu Summer. ikamu Tuapse "Shahtinskii yendwangu isisebenzi"
Indlela ukucacisa inombolo-zintathu
Kanjani ukuze uthole Savings Bank credit card noma imali kwi?
Izindaba Bunin. art izici
Okuzenzakalelayo curling izinwele curling:-Google +. Indlela yokusebenzisa othomathikhi curling izinwele?
Izindlela zokuvikelwa kolwazi ku-computer technology
Ukudoba Khoper - Kuhlale kumnandi ekhethekile